Warbixin: Kooxda Manchester City ayaa lasoo tabinayaa iney ku dhawdahay saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara Borussia. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Kooxda Manchester City ayaa lasoo tabinayaa iney ku dhawdahay saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara Borussia.
Warbixin: Kooxda Manchester City ayaa lasoo tabinayaa iney ku dhawdahay saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara Borussia.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 7-06-16 8:06 PM Kooxda Manchester City ayaa lasoo tabinayaa iney ku dhawdahay saxiixa xidiga kooxda Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.
26 sano jirkan ayaa inta badan kooxaha ka dhisan qaarada Yurub ay xusul duub ugu jireen sidii ay ku heli lahaayeen saxiixiisa maadaama uu u dhaliyey xilli ciyaareedkii tagay kooxdiisa 39 gool 46 kulan oo uu kasoo muuqday.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in kooxaha Man United iyo Arsenal ay sidoo kale daneynayeen saxiixa xidigan u dhashay dalka Gabon, balse sida safaxiga aadka loo qiimeeyo ee Gianluca Di Marzio ayaa aminsan in xidigan uu ku dhaw yahay ku biirista kooxda Man City.
Wararka ayaa intaas ku darayo in macalinka cusub ee kooxda Man City Pep Guardiola uu doonayo inuu kooxda dhiso xilli ay kooxda SKy Blues ka ku dhameystay kaalinta afaraad kala horeynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii soo idlaaday dhawaan.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in kooxda Man City horaantii todobaadkii aynu kasoo gudubnay saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Borussia Dortmund iyo xulka dalka Germany Ilkay Gundogan waxa ayna kooxda Etihad Stadium ku ciyaarta kula soo saxiixatay xidigan 21 Milyan oo ginni.